Imigaqo nemiqathango gabalala · Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
Imigaqo nemiqathango ngokubanzi (AGBs)
§ I-1 inyanzeliso kubahwebi kunye neenkcazo zamagama
(1) Le migaqo nemiqathango ilandelayo iyasebenza kuko konke ukuhanjiswa phakathi kwethu nomthengi kwinguqulelo esebenzayo ngexesha lomyalelo.
Umboleki nanguwuphi na umntu wendalo oqukumbela intengiselwano esemthethweni ngeenjongo ikakhulu ezingezizo ezorhwebo okanye umsebenzi wabo wobugcisa ozimeleyo (§ 13 BGB).
§ Isivumelwano se2 yesivumelwano, ukugcinwa kwesicatshulwa somvumelwano
(1) La malungiselelo alandelayo ekugqityweni kwekhontrakthi asebenza kwii-odolo ngevenkile yethu ye-intanethi https://oyoun.de.
(2) Ukuba isivumelwano sigqityiwe, isivumelwano siza kunye
Oyoun-Inkcubeko NeuDenken gUG
Inombolo yobhaliso HRB 213866 B
Bhalisa inkundla iBerlin Charlottenburg
(3) Ukunikezelwa kwempahla kwivenkile yethu ekwi-intanethi akuthethi ukuba unikezela ikhontrakthi ngokusemthethweni, kodwa sisimemo esingabopheleliyo somthengi soku-odola iimpahla. Ngoku-odola iimpahla ezinqwenelekayo, umboleki uthumela isithembiso esibophelelayo sokugqiba ikhontrakthi yokuthenga.
(4) Xa kufunyanwa iodolo kwivenkile yethu ekwi-intanethi, kusetyenziswa le mithetho ilandelayo: Umboleki ungenisa ikhontrakthi ebophelelayo ngokuya ngempumelelo kwinkqubo yoku-odola ebonelelwe kwivenkile yethu ekwi-intanethi.
Umyalelo wenziwa ngamanyathelo alandelayo:
1) Ukukhethwa kwemveliso efunwayo
2) Qinisekisa ngokucofa iqhosha u "Order"
3) Ukujonga iinkcukacha kwinqwelo yokuthenga
4) Ukusebenza kweqhosha "ukukhangela"
5) Phinda uhlaziye okanye ulungise idatha edlulileyo.
I-6) Ukubopha ukuhambisa i-oda ngokuchofoza iqhosha "iodolo lomrhumo" okanye "ukuthenga"
Phambi kokungeniswa okubophelelayo komyalelo, umthengi angabuyela kwiwebhusayithi ekubhalwe kuyo ulwazi lomthengi kwaye alungise okanye alungise iimpazamo zokufaka ngokucinezela iqhosha u "Buyela" eliqulathwe kwisikhangeli se-Intanethi esisetyenziswe nguye emva kokujonga iinkcukacha zakhe Rhoxisa iodolo inkqubo ngokuvala isikhangeli seintanethi. Ngokukhawuleza siqinisekisa ukufunyanwa komyalelo nge-imeyile eveliswe ngokuzenzekelayo ("ukuqinisekiswa komyalelo"). Ngale nto samkela umnikelo wakho.
(5) Ukugcinwa kweteksti yokubhaliweyo yeeodolo kwivenkile yethu ye-intanethi: Siya kukuthumela idatha yeodolo kunye nemigaqo neemeko zethu nge-imeyile. Ungajonga imigaqo kunye neemeko ngalo naliphi na ixesha ku-https: //oyoun.de/agb. Ngezizathu zokhuseleko, iinkcukacha zeodolo yakho azisafumaneki kwi-Intanethi.
§ Amaxabiso e-3, iindleko zokuthumela, intlawulo, umhla wokugqibela
(1) Amaxabiso abonakalisiweyo abandakanya irhafu yokuthengisa esemthethweni kunye namanye amaxabiso. Naziphi na iindleko zokuhambisa ziya kongezwa.
(2) Umboleki unokukhetha ukuhlawula ngePayPal, ikhadi lekhredithi (iVisa, Mastercard, American Express).
§ Ukunikezelwa kwe4
(1) Ngaphandle kokuba sichaze ngokucacileyo kwinkcazo yemveliso, zonke izinto esizinikelayo zikulungele ukuthunyelwa kwangoko. Ukuhanjiswa kwenzeka apha kwiintsuku nje ezi-5 zokusebenza. Kwimeko yokuhlawula kwangaphambili, ixesha elisikiweyo lokuhanjiswa liqala ngosuku emva komyalelo wentlawulo oya kwibhanki othunyelweyo kunye nazo zonke ezinye iindlela zokuhlawula, kusuku olulandelayo emva kokugqitywa kwesivumelwano. Ukuba umhla wokugqibela uwela ngoMgqibelo, ngeCawa okanye ngeholide yoluntu kwindawo yokuhambisa, umhla wokugqibela uphela ngosuku lokusebenza olulandelayo.
(2) Umngcipheko welahleko yengozi kunye nokonakala ngengozi kwento ethengisiweyo idluliselwa kuphela kumthengi xa loo nto inikezelwa kumthengi, kwanaxa kuthengiswa ngeposi.
§ I-5 yokugcinwa kwesihloko
Sigcina ubunini bempahla kuze kube yintlawulo epheleleyo yentengo.
§6 ilungelo lokurhoxiswa komthengi njengomthengi:
Abathengi banelungelo lokurhoxa ngokuhambelana nale miqathango, apho umboleki inguye nawuphi na umntu wendalo oqukumbela intengiselwano esemthethweni ngeenjongo zezorhwebo okanye zokuziqesha:
Unelungelo lokurhoxisa kule khontrakthi kwiintsuku ezilishumi elinanye ngaphandle kokunika isizathu.
Ixesha lokurhoxiswa ziintsuku ezilishumi elinesine ukusukela ngomhla apho wena okanye umntu wesithathu obizwe nguwe, ongenguye ophetheyo, uthathe iimpahla zakho.
Ukusebenzisa ilungelo lakho lokurhoxisa, kufuneka uqhagamshelane nathi
ngokusebenzisa ingxelo ecacileyo (umzekelo, ileta ethunyelwe ngeposi, ifeksi okanye nge-imeyile) yesigqibo sakho sokurhoxa kule khontrakthi. Ungasebenzisa isampulu yokurhoxa kwesampulu ukulungiselela le njongo, kodwa oku akunyanzelekanga.
Wenn Sie dieen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen all Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie erenseresereseresereseren haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, a dem die Mitteilung über Ihren Widerruf die Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diee Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; kwi-keinem Fall werden Ihnen wegen dieer Rückzahlung Entgelte berechnet.
Singala intlawulo de sizibuyise iimpahla okanye de ubonelele ngobungqina bokuba uyazithumela iimpahla, nokuba yeyiphi na ngaphambili.
Kuya kufuneka ubuyise okanye unikezele ngeempahla kuthi kwangoko kwaye kuyo nayiphi na imeko kungadlulanga iintsuku ezilishumi elinesine ukusukela kumhla owasazisa ngawo ngokurhoxiswa kwesi sivumelwano. Umhla wokugqibela uyahlangatyezwa ukuba uthumela iimpahla ngaphambi kwexesha leentsuku ezilishumi elinesine.
Uthwala iindleko ezikhawulezayo zokubuyisela iimpahla.
Ukuphela komgaqo wokukhansela
Ifom yokurhoxisa §7
ifomu ekubalekeni Model
(Ukuba ufuna ukukhansela isivumelwano, nceda ugcwalise le fomu uze uyithumele.)
I-Hiermit widerrufe (n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
I-Ordered kwi (*) / ifunyenwe kwi (*)
Igama lomthengi (s)
Idilesi yomthengi (s)
Isayinwa yomthengi (kuphela) xa kukwaziswa kwiphepha)
(*) Cima ngokufanelekileyo.
Imigaqo esemthethweni yewaranti iyasebenza.
§9 ulwimi lwesivumelwano
Njengolwimi lwekhontrakthi Ijamani iya kufumaneka ngokukodwa.
Ubume be-GTC Agasti 2021